DIP नेतृत्व स्क्रिन र SMD डिस्प्ले स्क्रीन बीचको भिन्नता - इनडोर आउटडोर नेतृत्व भिडियो प्रदर्शन स्क्रीन निर्माता
अब, एलईडी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिनको प्राथमिक घटकको रूपमा, एलईडी बत्ती (प्रकाश उत्सर्जक डायोड) दुई प्याकेजिंग विधिहरू छन्, अर्थात् DIP प्रकार र चिप एसएमडी प्रकार. सामान्यतया बोल्दै, DIP LED स्क्रीन मुख्यतया आउटडोर डिस्प्ले स्क्रीनमा प्रयोग हुन्छ, एसएमडी एलईडी इनडोर एलईडी ठूलो पर्दा मा प्रयोग गरीन्छ. ती दुईमा के फरक छ?
इन-लाइन एलईडीको प्याकेज भाँडिएको छ. पट्टि process को प्रक्रिया एलईडी मोल्डिंग मोल्डको गुहामा तरल इपोक्सी राल लेख्नु हो, त्यसपछि थिचेको एलईडी कोष्ठक सम्मिलित गर्नुहोस्, यसलाई भट्टीमा राख्नुहोस् इपोक्सी राललाई ठीक गर्न, र त्यसपछि फार्ममा मोल्ड गुहाबाट एलईडी अलग गर्नुहोस्. किनभने उत्पादन टेक्नोलोजी तुलनात्मक रूपमा सरल छ, कम लागत, एक उच्च बजार शेयर छ. प्रत्यक्ष प्लग-इन प्रकार भोल्यूममा ठूलो छ र म्यानुअल प्लग-इन वा एआई मेशिन द्वारा संचालित गर्न सकिन्छ. यसको उच्च चमक र साधारण जलरोधक उपचारको कारण, यो सामान्यतया आउटडोर एलईडी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिनको प्रकाश स्रोतको रूपमा प्रयोग गरीन्छ.
SMT LED लाई सर्किट बोर्डको सतहमा जोडिएको छ, एसएमटी प्रसंस्करण र रिफ्लो सोल्डरिंगको लागि उपयुक्त. यसले समस्या जस्तै समस्या समाधान गर्न सक्छ, ए angle्गल हेर्दै, उदासीपन, विश्वसनीयता र स्थिरता. हल्का पीसीबी बोर्ड र परावर्तनशील परत सामग्री प्रयोग गरीन्छ. सुधार पछि, इन-लाइन एलईडीको भारी कार्बन स्टील पिन हटाईनेछ, जसले प्रदर्शन प्रतिबिम्ब तह लाई कम इपोक्सी राल आवश्यक गर्दछ. उद्देश्य कम गर्न र घटक कम गर्न हो 。 यसरी, उपस्थिति माउन्ट एलईडी सजिलै आधा कमोडिटी वजन कम गर्न सक्छ, र अन्तमा प्रयोग अझ उत्तम बनाउनुहोस्. एसएमडी एलईडी सामान्यतया इनडोर एलईडी ठूलो पर्दा को प्रकाश स्रोत को रूप मा प्रयोग गरीन्छ, तर प्रविधिको सफलताको साथ, SMD LED को चमक धेरै सुधारिएको छ, र वाटरप्रुफ उपचार पनि राम्रो उपचार गर्न सकिन्छ. त्यसकारण, फिल्ड एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रिनमा एसएमडी एलईडी को आवेदन पनि बढ्दै छ.
LED स्क्रीन भिडियो भित्ताहरूको प्रयोगमा सम्भावित समस्याहरू